Tantara - Laser volamena
Masinina misy milina CO2
Fahitana milina fanodinana laser
Masinina Laser mahazatra
Masinina Laser milina
Machine milina hoditra
Fitaovana milina fanerena laser
Sheet sy Tube Laser Cutter
Sehatra tsy metaly tsy metaly
Ny fanaparitahana ny lamba amin'ny lamba
Lamba vita printy
Fanatanjahantena sy akanjo mavitrika
Lafo fitoeram-patety sy haingon-trano
Fanaparitahana ny fika
Mpiara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay avy amin'ny fifandraisana voalohany mankany amin'ny serivisy aorian'ny varotra. Amin'ny maha mpanolo-tsaina ara-teknika antsika, dia iarahantsika midinika amin'ireo mpanjifanay ireo ary mamolavola vahaolana izay mampitombo ny fahombiazana sy ny sanda. Miaraka amin'ny manontolo - alàlan'ny fizahan-toetra manamarina ISO 9001 - manolotra fonosana vahaolana laser mahasarika indrindra izahay.
Tetikasa maro kokoa
2018 an-dalana foana isika.
2017 rafitra fitantanana atrikasa marani-tsaina MES dia nahomby ary natsangana tsara amin'ny orinasa.
2016 ny fahitana fahita volamena Goldenlaser miaraka amin'ny rafitra roa-lohany tsy miankina, mahomby amin'ny fampiharana amin'ny indostrian'ny hoditra sy ny tongotra.
2014 Golden Laser ny Sales sy ny Service Center any Etazonia sy Vietnam fomba ofisialy naorina.
2012 Fandaharana fakantsary fanaraha-maso fakan-tsary laser nanamboarana rafitra fanatanjahantena dye-sublimation fanatanjahan-tena vita soa aman-tsara.
2011 Tamin'ny Mey 2011, GOLDEN LASER dia voatanisa tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny tsenan'ny Growth Enterprise Market Shenzhen Exchange (stock code: 300220)
2010 Niditra an-tsokosoko tamin'ny marika metaly sy fanenanana, VTOP - Fikambanan'ny tarika laser Fiber.
2009 Las2 RF lasady metaly novolavolain'i GOLDEN LASER.
Natao ny rafitra sokitra laser Galvo lozisialy ho an'ny fitaovana roll.
GOLDEN LASER voalohany 3.2 metatra fanapahana tariby vita amin'ny laser midina CO2 lehibe dia natolotra. Ny fahaizana mampanjary ny GOLDEN LASER ho an'ny format lehibe miolaka masinina laser fanapahana laser2 dia malaza amin'ny orinasa.
2008 Niditra tao amin'ny indostrian'ny lamba indostrialy. Voalohany voaray tsara ny fotoana voalohany handraisana ny fampirantiana indostria.
2007 Nivoaka ny tetezana laser voalohany eran'izao tontolo izao, nahitambatra ny fampihenana ny amboradara teo amin'ny solosaina sy ny fanapahana laser.
Ny Super maoderina 3D be pitsiny milina fanoratana laser laser.
2006 Taorian'ny fikarohana sy fampivoarana nandritra ny 3 taona, navoakan'ny rafitra an-tserasera izay napetraka, dia mahatsapa ny milina laser mifehy amin'ny alàlan'ny fifindran'ny data USB, fampitana data amin'ny Internet, ary tambajotra misy milina maro.
2005 Namboarina ny milina fanamboarana laser lehibe misy latabatra conveyor, izay midika fa ny mety ho famokarana automatique ho an'ny mpanapaka laser.
2003 GALVO andiany famokarana andian-dahatsoratra laser; Navoaka ny famatsiana herinaratra laser GOLDEN.
2002 Natao ny milina fanamiana sinoa vita amin'ny alàlan'ny sinoa, tsikera tsara any an-trano sy any ivelany.
Valan-javaboary volamena Laser, Lalana Tianxing, Hengdian Street, Chuanlong Avenue, Distrikan Huangpi, Wuhan, Hubei, Sina
CO2 milina fanoratana milina fanoratana